Label Sticker၊ Gift Box, စက္ကူသိုလှောင်ရေး Box - Huaguang
ဖောက်သည်များကိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များပေးရန်။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊ အပြုသဘောဆောင်သော၊ အထက်သို့၊ မိမိကိုယ်ကိုအကျိုးစီးပွား၊
စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်ခြယ်ထားသောကော်ဖီ 350g အဖြူရောင် c ...
ကဒ် box ကိုထုပ်ပိုးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၌ကော်ဖီကတ်ပြားများ၊ သကြားလုံးကတ်ပြားများ၊ ကွတ်ကီးကတ်ပြားများစသည်ဖြင့်ရှိသည်။ အလှအပလုပ်ငန်းသည် lipstick card box၊ mask card card, toner card box နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ဖိနပ်နှင့်အ ၀ တ်အထည်လုပ်ငန်း၊ ခြေအိတ်၊ အ ၀ တ်အစား၊ လက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကဒ်သေတ္တာသည်စျေးသက်သာသောကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာသက်သာစေသည်။ ကဒ်သေတ္တာသည်လက်ဆောင်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသည်။
အရေပြားစောင့်ရှောက်ရေးစက္ကူသေတ္တာသည် PVC စာအုပ်အမျိုးအစားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများဖြင့်လက်ဆောင်သေတ္တာထုပ်ပိုးခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်လုပ်ငန်းများကိုပိုမိုများပြားလာသည်။ နည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေပြီးစက်ကိရိယာအသစ်များသည်ငွီးငှေ့ဖွယ်လက်စွဲဖြင့်လည်ပတ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးလိုက်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများ၏အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည် လက်ဆောင်သေတ္တာအမျိုးအစားအားလုံးမှဖွဲ့စည်းပုံမှတက်နှင့်အောက်အဖုံးများနှင့်အခြေခံအဖုံးပုံစံ, ပေါင်းစပ်နှင့်အတူထောက်ပြ ...
မြှောင်းပုံမဂ္ဂဇင်းဖိုင်သေတ္တာသည်ဖိုင်တွဲများထဲမှတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရုံးလုပ်သားများသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားရန်အတွက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဖိုင်များကိုသိမ်းရန်နှင့်သိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ ရုံးထဲမှာစာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်အရေးကြီးပြီးမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ရည်ညွှန်းကိုးကား, ရံဖန်ရံခါရည်ညွှန်းရှိပါတယ်; အချို့မှာမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ပျင်းရိစွာထိုင်ကြသည်။ ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကစနစ်တကျဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒီနေရာတွင်ဖိုင်တွဲဖက် ...
အရာ ၀ တ္ထုကိုသိမ်းဆည်းထားသော box (အရာတော်တော်များများကရုံးစာရေးကိရိယာ၊ အလှကုန်၊ ဖိုင်ဒေတာ၊ tool သေး၊ sock၊ underpants စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ) သည်စုဆောင်းသည်စုဆောင်းသည်စုဆောင်းသည်စုဆောင်းသည် box သိုလှောင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းသေတ္တာများဟုလည်းသိကြသည့်သိုလှောင်သေတ္တာများကိုရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့များကရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤသေတ္တာများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တိကျသောနံပါတ်များဖြစ်ကာအချို့သည်ကြီးမားပြီးသေးငယ်သည်။ သို့သော်အများစုမှာဖိနပ်သေတ္တာ၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုသည်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးလူများ၏အဝတ်အစားများ၊ အစားအစာများ၊ အိုးအိမ်များ၊ လယ်ကွင်းသို့ခရီးသွားခြင်းနှင့်လူတို့၏ဘ ၀ များနီးပါးရှိသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအစိတ်အပိုင်းများ၏အသုတ်၏အတိုင်းအတာကဘာလဲ? ပုံနှိပ်ခြင်း၏အရောင်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သာမကဤမှင်မှုတ်သည်တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့လက်ဆောင်သေတ္တာကိုအခြေခံပြီးမင်အရောင်တည်ငြိမ်မှုကိုသက်ရောက်စေသောအချက်များ - မှင်၏အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။
Custom logo လက်လုပ်ဇိမ်ခံစက္ကူလက်ဝတ်ရတနာ Box ကို ...
လက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လက်ဝတ်ရတနာတီထွင်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်လက်ဝတ်ရတနာအဆက်အသွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမလိုသောခြစ်ရာများကိုကာကွယ်ရန်အကွာအဝေးပေါင်းစုံအကွာအဝေးဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချို့သောလက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာများသည်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အထူးပုံစံများနှင့်ပစ္စည်းများအရကွဲပြားသည်။ လက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ၏အဓိကအသုံးပြုမှုမှာအသစ်သောအသွင်အပြင်သက်ရောက်မှုအဖြစ်တည်မြဲသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ လက်ဝတ်ရတနာမျက်နှာပြင်ချေးခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်ခြင်းများမှလေထဲရှိဖုန်မှုန့်များနှင့်အမှုန်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာများကိုစုဆောင်းရန်
ဤစာရွက်လက်ဆွဲသေတ္တာသည်ကလေးများအတွက်လက်ဆောင်များခြုံရန်သို့မဟုတ်ကလေးများအတွက်ကစားစရာအသေးများကိုစုစည်းရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကလေသံမှာအပြာနှင့်အဖြူဖြစ်သည်။ Wave dot ပုံစံ၏ဒီဇိုင်းသည်စင်ကြယ်။ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးချစ်စရာကောင်းသော၊ ကလေးများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ ဒီလိုအရောင်ကိုက်ညီမှုကိုငါဒီစာရွက်ကနေထုတ်ထားတဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုကိုင်ပြီးပုံနှိပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုကိုင်တွယ်ချင်တယ်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ ၎င်း၏အရောင်၊ အလင်း၊
ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းသည်ဗဟိုကိုအမြင်အာရုံနှင့်အခြားအာရုံ ၄ ခုနှင့်အရန်အထောက်အကူပြုသောကမ္ဘာကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဝတွင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လူတို့၏အာရုံကိုမတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်အပြင်းအထန်နှိုးဆွပေးပြီး ၀ ယ်လိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထုပ်ပိုးမှု၏ကျက်သရေသည်“ အာရုံငါးပါး” ကို သုံး၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအသုံးပြုသောခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ဒီနေ့လက်ဆောင်သေတ္တာမှတစ်ဆင့်ထုပ်ပိုးခြင်းဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြပါစို့: Vision သည်အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏အချက်အချာဖြစ်သည်။
မြှောင်းပုံအိမ်မှာသိုလှောင်မှု box ကိုခြေအိတ် compa ...
ထုတ်ယူခြင်း - သင့်လျော်သောထုပ်ပိုးခြင်းပစ္စည်းများ၊ လိမ္မာပါးနပ်သောနည်းပညာဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းဒီဇိုင်း၊ ကွန်တိန်နာဖွဲ့စည်းပုံပုံစံ၏ကုန်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးအလှဆင်ခြင်းဒီဇိုင်း၏အလှဆင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းအရောင်၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ ပစ္စည်းစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘာသာစကားသည်ကုန်ပစ္စည်းအားထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေးသည်၊ သို့သော်ပစ္စည်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်အာရုံပုံရိပ်ကိုလည်းတည်ဆောက်သည်။ စားသုံးသူများအတွက်လိုအပ်ချက်မှာအသီးမှည့်ဂျုံ၏အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ပန်းစည်းများစွာရှိသည်၊ ကွဲပြားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြရန်လူအမျိုးမျိုးအားလူအမျိုးမျိုးအားပေးမည်။ ပန်းပွင့်များ၏နားလည်မှုသည်နက်ရှိုင်းမှုမရှိသော်လည်းယနေ့ခေတ်လူတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ချစ်သူများသို့နှင်းဆီပန်းများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများထံသယ်ဆောင်ရန်၊ ပန်းစည်းများ၊ ပန်းသေတ္တာများ၊ ပန်းသေတ္တာထုပ်ပိုးမှုများတစ်ခုစီတွင်မတူညီသောအခန်းကဏ္ and နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် Valentine's Day အတွက်ပန်းစည်းများရလိုပါသည်။
unde ၏ကတ်ထူမီးခိုးရောင်အံဆွဲစက္ကူသိုလှောင်မှုသေတ္တာ ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေဒါမှမဟုတ်ခြေအိတ်တွေကိုအံဆွဲထဲထည့်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဖို့လွယ်တယ်။ သိုလှောင်သေတ္တာများသည်စီရန်လွယ်ကူသည်၊ စုစည်းရန်လွယ်ကူသည်၊ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များကိုသီးခြားထားရန် ပို၍ သန့်ရှင်းသည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှိစက္ကူသိုလှောင်ခန်းသည်လှပသောအရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တကယ့်သင့်တော်သောသေတ္တာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ စက္ကူသိုလှောင်ခန်းများလိုအပ်သောအဝတ်။ Be ...
သုံးဖက်မြင် Hot Stamping အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအချက်များနှင့်ချို့ယွင်းချက်များကုသမှု
သုံးဖက်မြင် hot stamping သည်အတုအစစ်ကောင်းခြင်းနှင့်အနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော bump နှင့် hot stamping တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်သုံးဖက်မြင်ပူတံဆိပ်တုံး၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းသည်အကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည် ...
High-end လက်ဆောင်သေတ္တာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာသိသနည်း
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှု၌ပင် high-end လက်ဆောင်သေတ္တာ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမရှိသော်လည်းလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အဓိပ္ပာယ်မှာကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အဆင့်မြင့်လက်ဆောင်သေတ္တာကိုအဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစွာလိုအပ်သော pasting box အတွက်ဆွေးနွေးထားသည်။ နှင့်လက်စွဲစာအုပ်ပီပီ pasting box ကိုအကြောင်းအရာလိုအပ် ...
Abstract: စက္ကူသည်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများပုံနှိပ်အရည်အသွေးအပေါ်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ, စက္ကူ၏သဘောသဘာဝကိုမှန်ကန်သောနားလည်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတိုးတက်စေရန်အတွက်စက္ကူကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးပြုခြင်း။